အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အေတပ်တွေ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား
ကချင်ပြည်နယ်မှာ လှုပ်ရှားနေသော အစိုးရတပ်သားတချို့ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းက တွေ့ရစဉ်
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း အစိုးရတပ်တွေနဲ့ ကေအိုင်အေ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တွေအကြား ဖားကန့်ဒေသနဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွေမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
အစိုးရတပ်မတော်ရဲ့ စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဋ္ဌာနချုပ် စကခ (၇) လက်အောက်ခံတပ်တွေဟာ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းကျေးရွာရဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက် ၁၀ မိုင်အကွာလောက်မှာ ဇွန် ၁၅ ရက်မနေ့ကစပြီး ဒီနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေတာလို့ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း ၆ တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးတန်ဆန့်က ပြောပါတယ်။
"မနေ့ကတော့ ၆ နာရီလောက်အထိပါပဲ၊ ၃ ကြိမ်လောက်ဖြစ်တယ်၊ ဒီမနက်ကျတော့လည်း ၅ နာရီ ၂ဝ ကနေစဖြစ်တာ ခုထိပဲ၊ နာရီဝက်လောက်နားလိုက် ပြန်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေတာ အခုက ခမရ ၄၂၃ နဲ့ ခမရ ၄၂၄ ပါ"
လုံးခင်းကျေးရွာနဲ့ ၁၀ မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ နမ်ကျန်ခူးချောင်းဖျားနားက အောင်လဲန့်၊ နမ့်စန်းသုံး ကျေးရွာတွေတစ်ဝိုက်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာပါ။
ဖားကန့်အခြေစိုက် အစိုးရတပ်မတော်ဗျူဟာရုံးကို RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ လုံခြုံရေးအခြေအနေ အရ လောလောဆယ် အတည်ပြုချက်မပေးနိုင်သေးကြောင်း တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်းဒေသ ကံဆီးနဲ့ အောင်ဘာလေ ကျေးရွာတစ်ဝိုက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလအတွင်းက အစိုးရတပ်မ ၆၆ လက်အောက်ခံတပ်တွေနဲ့ ကေအိုင်အေတပ်ရင်း ၆ တို့အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့် လုံးခင်းနဲ့ ကံဆီးကျေးရွာတွေက ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာ ဒေသခံ တစ်ထောင်ကျော်လောက်ဟာ အခုချိန်ထိ ခိုလှုံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်း ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မုံးကိုးဒေသမှာ အစိုးရတပ်နဲ့ ကေအိုင်အိုတပ်တွေ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းက တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း KIA နဲ့ မုံးကိုးဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။အစိုးရတပ်မတော် အရှေ့မြောက်ပိုင်း လက်အောက်ခံတပ်တွေနဲ့ ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ ၄ လက်အောက်ခံတပ်တွေအကြား မုံးကိုးမြို့နယ် ဖေါင်းဆိုင်ကျေးရွာအနီးမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်း ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ ၄ က ဗိုလ်မှုးတစ်ယောက်က RFA ကို အတည်ပြု ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင် မုံးကိုးခရိုင်လို့ ခေါ်မှာပေါ့၊ တပ်ရင်း ၃၈ ပေါ့၊ မနေ့ကလည်းဖြစ်၊ ည ၈ နာရီခွဲ ၉ နာရီလောက်ကနေဖြစ်တာ၊ ဒီနေ့လည်း ထပ်ဖြစ်တာပေါ့၊ ဒီမနက် ၈ နာရီလောက်မှာ ဖောင်းဆိုင်ဘက် ရွာထဲမှာ လက်နက်ကြီးတွေပစ်နေတယ်၊ မုံးကိုးကနေ တက်လာတဲ့အဖွဲ့နဲ့ ကျနော်တို့ရှိတဲ့အဖွဲ့ပေါ့၊ မန်စပ်ဆိုတဲ့ အပေါ်အထက်မှာဖြစ်တာ”
တိုက်ပွဲကြောင့် နှစ်ဘက်ထိခိုက်ကျဆုံးမှုကိုတော့ အခုအချိန်အထိ မသိရသေးဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။
Shang Lawt Brang ni E shakut ga law. Galoi mungasum n_jaw ga yaw.
Jun 16, 2015 03:16 PM